Abadlali abavelele bazophuthelwa ama-quarter-final e-Champions League okokuqala ngqa eminyakeni eyi-16 | Scrolla Izindaba
Abadlali abavelele bazophuthelwa ama-quarter-final e-Champions League okokuqala ngqa eminyakeni eyi-16
Akuyona imfihlo ukuthi abadlali abavelele uLionel Messi, oneminyaka engama-33, noCristiano Ronaldo, oneminyaka engama-36 sebesondele ekuthatheni umhlala phansi emsebenzini wabo omuhle.
Kepha ngokokuqala ngqa eminyakeni eyi-16 ukuthi kubabibikho kubo noyedwa ozodlala kwi-final eight ye-UEFA Champions League. Lesi yisikhathi sokuqala kusukela ngesizini yowezi-2004/2005, mhlawumbe kukhombisa ukuphela kwesikhathi.
Laba bobabili basebenzise iminyaka eyishumi edlule bephula irekhodi ngemuva kwerekhodi. Kepha lokhu kuyirekhodi noyedwa wabo azojabula ukulibona liphela.
URonaldo neqembu lakhe le-Juventus bakhishwe kulo mqhudelwano yi-FC Porto ngomthetho wamagoli asekuhambeni ngamaphuzu agcina ngokulingana ngamagoli amane kwamane.
UMessi nozakwabo eqenjini le-Barcelona bakhishwe ngonya kulo mqhudelwano yi-Paris Saint Germain ngokuhlulwa ngamagoli amahlanu kwamabili.
Ubufakazi bokubusa kwabo ukuthi bathengise kanjani ngemiklomelo ye-Ballon d’Or, okuyindondo ehlonishwayo ebholeni lomhlaba, phakathi kowezi-2008 kuya kowezi-2017. UMessi usenqobe lo mklomelo amahlandla ayisithupha noRonaldo amahlandla ayisihlanu, kucace bha ngomdlali ovela e-France uMichel Platini, uyinqobe amahlandla amathathu.
Abalandeli balaba bazobe besaba ngosuku lapho laba ababili bezothatha umhlalaphansi. Kepha kuze kube yileso sikhathi ngokungangabazeki bazokujabulela ukuzibona eminyakeni embalwa edlule yemisebenzi yabo.
Umthombo wesithombe: @DNAIndia